[GIMP] Fampianarana hamoronana effets "Vintage" | Avy amin'ny Linux
helena_ryuu | | famolavolana, GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Eto indray dia mitondra tutorial vaovao ho an'ny GIMP (aza mieritreritra fa hadinoko> _>), ity ny vokany "Vintage"Na ny fahanterana, ny vokatra izay mampiavaka ny fisehoan'ny sary nopotehin'ny fotoana ny sary iray, tena tany am-boalohany sy nostalgic, na koa maninona, manome rivotra mahazatra sy kanto: D.
Ho an'ity fampianarana ity dia hampiasa ny sarin'ity izahay daffodil tsara tarehy, ity effet ity matetika dia miasa amin'ny sary misy loko mamirapiratra, satria manova ny opacity sy manova ny loko.
Misy zavatra tsy tokony ho adino dia izany mila manandrana ianao , satria samy hafa ny sary tsirairay ary ny soatoavina izay toa tsara indrindra amintsika no tokony ampiharina, ao an-tsaina izany, miaraka amin'ny sary sy ny gimp nanomboka, andao isika hiasa!
Voalohany dia tsy maintsy manova ny fifanoherana isika, noho izany dia handeha loko >Famirapiratana sy fifanoherana ary mampihatra izahay:
Manova ny mahavoky izahay, mampiasa loko > Tonony sy mahavoky, manome an'i Hue ny sandan'ny -12 ary ny saturation ny sandan'ny 21.
Hitodika any isika izao loko > miolakolaka ary manova ny soatoavina izahay amin'ny alàlan'ny famindrana ireo miolakolaka mifanaraka amin'ny loko voalohany.
Aorian'ny nanovantsika ny graf dia hiverina isika loko > feo sy mahavoky ary manova ny soatoaviny toy izao izahay:
Raha vantany vao vita izany dia hanampy sisin-tany maizina manodidina ny sary isika, mba hanahaka ny fanjavonan'ny zoro. Mamorona sosona vaovao izahay sosona > sosona vaovao , mangarahara.
Misafidy ny fitaovana fifantina elliptical izahay ary manao ny safidin'ny faritra iray manontolo
Avy eo isika dia mankany mifidy > nanjavozavo ny zavatra nosoratany, ary manome azy sanda 150 izahay.
ary avadika ny safidintsika.
Ankehitriny isika dia mameno ny sosona amin'ny loko mainty ary mametraka ny opacity ho 50%.
Ary farany, mba hanomezana azy ny tami'ny sary naseho tamin'ny taratry ny masoandro, dia mamorona sosona vaovao izahay, izay nolokoinay mavokely na magenta, manome azy io ho 8 - 10%.
Ny sary vita:
vokatra tena tsara ary manome rivotra mahazatra ho an'ny sary. raha tsy misy ado hafa dia hamaky amin'ny tutorial manaraka isika> w
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » famolavolana » [GIMP] Fampianarana hamoronana ny vokatra "Vintage"
Wow!… Tiako ny vokatra azonao tamin'ny sary. Tutorial mahaliana ...
Fandraisana anjara tsara !!
Vokatry ny Instagram io, sa tsy izany? Mahagaga!
eny, hanisy vazivazy mihitsy aza aho nanao hoe "weeeee nanao izany izahay nefa tsy nampiasa instagram" tamin'ny faran'ny lahatsoratra fa nahatsapa aho fa afaka manafintohina olona iray (na mety hanafintohina ahy izy ireo) 😀 hahahaha
Soa fa tianao io ^ _ ^
xDDD Iza no mety ho tafintohina amin'izany?
Tsy haiko hehehe fa tsy misy tsy fahampiana olona tsy tia vazivazy mihintsy, marina?
Ie! Fandraisana anjara lehibe 🙂
Etsy an-danin'izany, MIARAHABA amin'ny asa soratra, nihatsara be ianao, arahaba soa tokoa 😉
Misaotra indray noho ny fandraisanao anjara ^ - ^
eeeeh ratsy toetra be ve aho amin'ny fanoratana lahatsoratra ??? > _> satria tsy nilaza tamiko izy ireo!
Tiako ny mandray anjara amin'ity tranokala ity (^ o ^) ノ
HAHAHAHAHA tsia tsia tsara ny lahatsoratrao, fotsiny indraindray ianao manary accents na sora-baventy na ... tsara rehefa mifankahita amin'ny Internet aho dia milaza aminao tsaratsara kokoa LOL!
Mianatra manivana sary amin'ny CSS3 XD aho
Ary tsy azo avela ao anaty script io? Ny zava-poana rehetra amin'ny fanovana sary dia misaotra anao mandrakizay mandrakizay.
Nihevitra aho fa tamin'ity tranonkala ity dia nilaozan'izy ireo ny sary, tsy manam-pahaizana aho fa raha nianatra sary aho, vao haingana aho no naka gimp ho tonian-dahatsoratra, talohan'ny nampiasako mtpaint, fampianarana tena tsara sy tsara koa. mahafaly
Tena tsara, betsaka ny zavatra ianarako avy amin'ny Gimp, amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny ilay kisary hanombohana azy. u_u8
Tena tsara, misaotra an'ireo lesona ampiasaintsika ireo izay ampiasako Gimp, izay miaraka amin'ny Xubuntu fa tsy jereko akory. Ny vokatra iray tena tiako indrindra dia ny an'ny sarimihetsika Sin City, sary mainty sy fotsy ary zavatra (miloko manaitra) miloko. Avelako eo izy, hehehe 😉
aaaah raha manana izany aho dia aza manahy, hehehe, raha tao an-tsaiko io xD
Ary inona izao no ataoko amin'ny fakantsary HDR novidiko!? Nahita an'io taloha ... 😀
Fa mahafinaritra mahafinaritra ny tutorial !!!
Tena tsara! .. .. misaotra amin'ny fizarana amintsika rehetra (tsy misy ilana azy amin'ny famolavolana) xD
Tsara !! Misaotra ny asanao, miaraka amin'ny GIMP miaraka amiko aho.
Rohy iray ho antsika izay tia sary sy fifaninanana sary maimaim-poana, an-tserasera, maimaimpoana miaraka amina loka, andramo alohan'ny faran'ny taona
misy sokajy maro ary vakio ny fototra.
Misaotra betsaka noho ny fandraisanao anjara, tutorial tsara dia tsara.
Nanana traikefa ratsy tamin'ny GIMP aho, tsy noho ny fampiharana fotsiny, fa noho ny fampiasako azy tamin'ny Photoshop…. (10 taona mahery), ary ho an'ny hakamoana ... XD
fampianarana tena tsara, mahaliana, tsy mbola nijery iray teto nandritra ny andro maromaro aho ary tsara kokoa noho izao dia nanapa-kevitra ny hampiasa safidy maimaim-poana.
Tute tsara, misaotra tamin'ny fizarana azy 😀
Mandehana fampianarana hafa miaraka amin'ny GIMP…. mihamaro hatrany ireo izay mirona amin'ity editor ity…. Vetivety dia tsy hilaza ahy adala izy ireo satria aleoko ny Debian / GIMP fa tsy Windows / Photoshop
Torolàlana hanombohana amin'ny Gimp.
Misaotra betsaka fa manampy ahy be
Calligra 2.5.4 vonona hampiasa